ဘယ်လိုအခါမှာ လိင်တံကျိုးနိုင်သလဲ | OnDoctor
အမျိုးသားများအတွက် အလန့်တကြား ထမေးသောမေးခွန်းမှာ လိင်တံပြည်ကျနေပါတယ် ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ ?ကူးစက်ရောဂါလား? ဆီးလမ်းကြောင်းပြည်ကျခြင်းသည် သေချာကုသရန် လိုအပ်သောရောဂါတစ်ခုပါ။ ပြည်ကျရသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်တစ်မျိုးမျိုးကနေခြင်းသည် သတိထားသင့်သော အချက်ပါ။ လိင်တံအရည်ကျခြင်းသည် ပိုးကူးစက်ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုလျှင် ဘက်တီးရီးယားလား? ဗိုင်းရပ်စ်လား? မှိုပိုးကြောင့်လား? စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးနှင့်သုတ်ရည်မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်တမျိုးမျိုးကျခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ၎င်းဖြစ်သောလက္ခဏာသည် အများအားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ကူးစက်သော ရောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး လျှင်မြန်စွာရောဂါရှာဖွေရန်နှင့် ကုသမူယူရန် လိုအပ်ပါတယ်။
လက္ခဏာများမှာ ထွက်သောအရည်ပမာဏသည် အနည်းအများကွာခြားတတ်ပြီး အရောင်အနေဖြင့် အဝါရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အချို့သည် မနက်ပိုင်းကျတတ်ပြီး အချို့မှာမူ တနေကုန်တောက်လျောက် ကျတတ်ပါတယ်။ အရည်ကျခြင်းနှင့်အတူ ခံစားရနိုင်သော လက္ခဏာများမှာ …..
– ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သောကြောင့် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း
ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံမူကြောင့် ကူးစက်သောဘက်တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုင်းရပ်ပိုးများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရည်ပြားထိပ်ဖြတ်သူနှင့် မဖြတ်သူအမျိုးသား ၂ ဦးလုံးတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ သန့်ရှင်းမူအားနည်းခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် လိင်ဆက်တံခြင်းကြောင့် ကူးစက်သောပိုးများကြောင့် ရောင်ရမ်းနိုင်ပါတယ်။
အရည်ကျသော အကြောင်းရင်းများမှာ ….
(1) ဂနိုရောဂါကြောင့် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း
(2) ဂနိုမဟုတ်သော အခြားအကြောင်းကြောင့် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဂနိုရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသောကြောင့် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(2) ဂနိုမဟုတ်သော အခြားအကြောင်းကြောင့် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း
ဂနိုမဟုတ်သော အခြားအကြောင်းကြောင့် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းသည် အများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်၂၀ မှ ၃၅နစ်အရွယ်အဖြစ်များပါတယ်။ အချို့လူများသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဆပ်ပြာများ၊ ဆပ်ပြာခဲများကြောင့်လည်း ဓာတ်မတည့်မူများဖြစ်စေပါတယ်။
အရည်ကျခြင်းသည် သို့မဟုတ် ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်းသည် ဆီးထဲ ရောဂါပိုးများရှာဖွေခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်းနှင့် အရည်ကို ခွဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုသမူသည် ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်၍ ကုသမူခံယူသင့်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်လျှင် ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ကုသခြင်း၊ မှိုပိုးသတ်ဆေးဖြင့် ကုသခြင်းနှင့် ဓာတ်မတည့်မူကြောင့် ကုသခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။